Kumnandi ngakumbi kwiiPhilippines kwindawo erustic, yokuphumla eshushu yokuhlambela eKawa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IiPhilippines News Breaking » Kumnandi ngakumbi kwiiPhilippines kwindawo erustic, yokuphumla eshushu yokuhlambela kwiKawa
Icandelo lokungenisa izihambi • LGBTQ • iindaba • abantu • IiPhilippines News Breaking • Ukwakha kwakhona • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Kumnandi ngakumbi kwiiPhilippines kwindawo erustic, yokuphumla eshushu yokuhlambela kwiKawa
Ibhafu yekawa kwiAntique
Uncumo lwasePhilippines ngumlingo omsulwa kubantu abaninzi emhlabeni, kwaye eli lizwe laseMpuma Asiya lilungele kwakhona ukwamkela iindwendwe.
Kutheni ungacebisi ukuthatha ibhafu Kawa. ISebe lezoKhenketho lasePhilippines lithembisa i-rustic. kunye namava okuphumla
ISebe lezoKhenketho ePhilippines (DOT) lilungiselela ukwamkela iindwendwe kwakhona, lihlala liqhuba imisebenzi emitsha kubahambi ukuba bafumane amava ngelixa liqinisekisa ukuba zonke iinkqubo zokhuseleko zamanye amazwe ziyahlangatyezwa kwiindawo ezahlukeneyo.
Kumnandi ngakumbi kwiiPhilippines, ngemisebenzi iphinda ilungiswe yi-DOT yokubonelela ngamava amatsha nahlukileyo kubakhenkethi bamanye amazwe. Urhulumente wasePhilippines ulungiselela ukwamkela abahambi ngophuhliso lweziseko zophuhliso kubandakanya ukuphuculwa kwezikhululo zeenqwelo moya zasekhaya nezamazwe aphesheya kunye neendlela ezintsha zokuqinisekisa ukufikelela ngokukhawuleza kwiindawo zethu zommandla, utshilo uNobhala wezoKhenketho uBernadette Romulo-Puyat.
Ngaphezulu kweziqithi ezingama-7,000 ezibonelela ngamava awodwa kubakhenkethi, iiPhilippines yindawo eyahlukileyo ngokungafaniyo nezinye. Nokuba kuyaziphumza elunxwemeni okanye ezintabeni, ukonwabela ubomi obudlamkileyo basezidolophini, okanye ukuntywiliselwa kwinkcubeko yemveli, amava awohlukeneyo ohlobo kuzo zonke iintlobo zabahambi.
Nazi izinto ezisibhozo ezikhethekileyo kwiiPhilippines ezinokuzama kwiindawo ezahlukeneyo zelizwe:
1. Ukuhamba ngebhayisikile ujikeleze i-Intramuros kwibhayisekile ye-Bamboo
Thatha uhambo lwakho lokuhamba ngebhayisikile uphakamise inotshi usebenzisa iibhayisikile zoqalo. I-Bambike Ecotours inika ithuba lokuphonononga isixeko esineembali se-Intramuros ngendlela eyahlukileyo. Ezi bhayisekile zohlobo lwe-bamboo ziza ngeendlela ezininzi zokuhamba ngokukhuselekileyo nangokukhululekileyo kunye neBambassadors ezisebenza njengezikhokelo kumakhubalo awodwa kaManila.
2. Ukutyhutyha iiNdlela ezijikelezayo zeBanaue kwibhayisikile yomthi
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokonwabela imbonakalo entle yeminyaka engama-2,000 50 eyenziwe ngabantu eyenziwe ngamarayisi eBanaue? Ewe, ngezithuthuthu ezenziwe ngomthi ezikrolwe liqela elinye lemveli, kunjalo! Yenziwe ngamanqatha omthi kunye namaqhekeza avela kumavili amadala erabha, la mavili mabini anokuhamba ngokukhawuleza kangange-XNUMXkph, kwaye ngokwenene bubungqina kubugcisa nobukrelekrele babantu baseIfugao.
3. Vavanya ibhalansi yakho kwii-Bamboo Stilts eCebu
I-Kadang-Kadang okanye i-Bamboo stilts ivumela iindwendwe ukuba zibone iPhilippines ukusuka kwindawo ephezulu. Abakhenkethi eCebu banokuvavanya ibhalansi kunye nesantya sabo ngokutsiba kwizitulo kunye nokuthatha inxaxheba kugqatso lweqela elibalekayo (okanye elijijayo) kwiimitha ezili-100. Kuthathelwa ingqalelo njengomdlalo wobuntwana kwizizukulwana ngezizukulwana, uye waqwalaselwa njengomdlalo wemveli phantsi kweLaro ng Lahi ngo-1969.
4. Yiya ngaphandle kwendlela kwiLahar Adventure ePampanga
Ukuqhuma kwePinatubo kubangele ukonakala kakhulu kwiCentral Luzon, kodwa abahlali bafumene indlela yokusebenzisa ukuhamba kwe-lahar ukusuka kwintaba-mlilo kwaye bayiguqulela ekubeni yindawo yabathandi bezemidlalo abagqithisileyo. Abahambi abanesidingo sesantya banokubhukisha ukhenketho lwendlela engekho kwi-4 × 4 okanye isithuthuthu esikhwela kwimilambo kunye nomhlaba oyisanti ngomnye weyona mimandla ikhethekileyo kwiiPhilippines.
5. Hlaziya kwindawo yokuhlamba i-Kawa e-Antique
I-Kawa okanye i-cauldron enkulu ihlala isetyenziselwa ukupheka i-fiesta yokuhamba ePhilippines, kodwa kwiphondo le-Antique, ibonelela ngamava e-rustic kunye nokuphumla. Iindawo zokungcebeleka ezisecaleni kwentaba zamkela iindwendwe emva kohambo ehlathini laseTibiao ngamanzi ahlaziyayo ashushu kwi-kawa, enamanzi afudunyezwe ngomlilo weenkuni kunye nevumba elimnandi lemifuno kunye neentyatyambo. Abo bafuna ukufumana olunye uhlobo lonyango banokundwendwela i-Tibiao Fish Spa apho banokufaka iinyawo zabo echibini ukuze iintlanzi zibambe kwaye zikhuphe.
6. Ndwendwela uKhozi lwasePhilippine eDavao
Yiza undwendwele ukhozi olukhulu lwasePhilippines, lolona khozi lukhulu lukhoyo emhlabeni. Ezi ntlobo zisengozini yokukhuseleka zikhuselwe kwiindawo ezingcwele ezifana neNtaba yeHamiguitan Range Wildlife Sanctuary eDavao. Uhambo olunzima kakhulu luvuzwa ngobuncwane bokubona kubandakanya nethuba lokubukela iiPhilippines Eagles xa zibaleka.
Ukujonga nje ngokukhawuleza, iindwendwe zinokukhetha ukutyelela iZiko leeKhozi lasePhilippine, ihlathi elinemvula e-Davao City elikhuselayo kwaye lizalise iiPhilippines Eagles ekuthinjweni.
7. Funda ubugcisa boMthonyama bokuLuka kwisekethe yelaphu yaseCordillera
Izizwe eziphakamileyo zommandla weCordillera zinenkcubeko etyebileyo eyolukiweyo kumalaphu abo. Olu khenketho luzisa abahambi kumboniso omangalisayo wokunxibelelana kunye nokwazisa kweempahla ezenziwe kwingingqi zisebenzisa umqhaphu kunye nezinye iintsinga zendalo ezilukiweyo kunye nokuluka kuyilo lwazo lwendabuko oludluliselwe kwizizukulwana. Ukuma kukhenketho kubandakanya ukuluka iidolophana kunye neemyuziyam, kunye namathuba okuya kuthenga isikhumbuzo semisebenzi yobugcisa eyenziwe ngezandla ethungiweyo kumanqaku anqabileyo engubo okanye afakwe kwiziqwenga zokuhombisa.
8. Uhambo lwe-Organic Green Tour (OGT)
Le sekethe ilandelela iingcambu zokutya zasePhilippines ngokudibanisa ukhenketho lweefama eziphilayo kunye nokutya kwesintu kusetyenziswa imveliso esandula kuvunwa. Ukhenketho luhamba ngeBaguio-La Trinidad-Itogon-Sablan-Tuba-Tublay (BLISTT) kunye neendawo zokhenketho lwefama eBenguet Agro-Eco Farm eSablan nase-UM-A kwifama yaseTuba. Iindwendwe zinokukhetha imveliso yazo kwaye zinokuthatha inxaxheba kumbhiyozo woluntu ngokwesiko lokujikeleza umlilo womlilo phakathi kwomoya omtsha wentaba.
Amanyathelo okhuseleko akumgangatho ofanayo
Le misebenzi ilindele ukubuyela kwakho kwiiPhilippines apho ubushushu belizwe buhambelana khona nokwamkela iindwendwe kwalapho. Cebisa amava akho ohambo ngokuzama le misebenzi mitsha iveliswa rhoqo yi-DOT. Ngelixa ilizwe lilindele ukuvulwa kwakhona, abasebenzi bezokhenketho ePhilippines bafumana uqeqesho rhoqo. Ukusekwa kuphumeza ukhuseleko olusemgangathweni kumaziko abo ukukhusela iindwendwe zabo kunye nabasebenzi, ukuqinisekisa ukuba kuphela ngabo bavunyiweyo bavunyelwe ukuvula nokwamkela iindwendwe.
I-DOT yanikwa iStampTravels Stamp liBhunga lezoKhenketho kwiHlabathi liphela noKhenketho ngokwamkela "iinkqubo zempilo nezempilo ezisesikweni ezisemgangathweni" eziza kuqinisekisa ukuhamba ngokukhuselekileyo ngexesha lobhubhane.
Urhulumente wasePhilippines ngokusebenzisa i-Inter-Agency Task Force yokuLawula izifo eziSulelayo eziSasazekayo uhlala ehlaziya iinkqubo zawo zokukhusela abahambi.
Ukwazi uhlaziyo lwamva nje kunye neengcebiso zokuhamba malunga notyelelo lwasePhilippines https://www.philippines.travel/safetrip